Boateng oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ku amray inay guriga joogaan intuu socdo Euro 2016!! – Gool FM
(FILES) This file photo taken on July 14, 2014 shows Germany's defender Jerome Boateng posing for a photo with his daughter Soley and the World Cup trophy after winning the 2014 FIFA World Cup final football match between Germany and Argentina 1-0 following extra-time at the Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil. Boateng, who was in the German team playing at the Stade de France during the November 13 Paris jihadist attacks, said in Sport Bild weekly on June 8, 2016 his wife and five-year-old twins will not go to France to watch him play in the European Championship because of terror fears. / AFP PHOTO / FABRICE COFFRINIFABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images
(France) 08 Juunyo 2016. Daafaca reer Germany Jerome Boateng ayaa ku amray xaaskiisa iyo caruurtiisa inay gurigooda joogaan inta uu socdo koobka Euro 2016 ee ka bilaabanaya jimcaha dalka Faransiiska sababo la xiriira cabsi laga qabo ururka arxanka daran ee Daacish ISIS.
Daafaca ayaa sheegay inuusa awoodeyn inuu 100% diiradda saaro kubbada cagta haddii ay garoonka joogaan xaaskiisa Sherin iyo labadiisa gabdhood ee matanaaha ah Soley iyo Lamia.
“Qofkasta nafsadiisa go’aan haka gaaro sida loola tacaalo iyada oo aniga marhore ayaanba go’aansaday,” Sidaa ayuu usheegay jariirdda ciyaaraha ee Bild.
“Reerkeyga iyo caruurteyda ma imaan doonaan garoonka, halista si fudud waa mid aad u wayn.
“Sida cad waa mid murago leh in lala tacaalo su’aashan oo kale. Laakiin waxyaabo badan ayaa dhacay maalmihii yaraa ee la soo dhaafay taa oo qof ka yeeleysa inuu fal caliyo.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan si buuxda diiradda u saaro kubbada cagta inta lagu guda jiro Euro, waxaana daremayaa si aad u fiican haddii aysan reerkeyga joogin garoonka.”.
Boateng ayaa garoonka kula jiray xulkiisa Jarmalka bishii November ee la soo dhaafay markaa oo uu Paris ka dhacay weerarkii ay ku dhinteen 130-ruux kaa oo garoonka dibadiisa ka dhacay isla markaana la isku dayayay in la soo gaarsiiyo garoonkii ay ku ciyaarayeen.
Maalmo yar kaddib, kulan saaxiibtinimo oo u dhexeeyay Jarmalka iyo Netherlands ayaa la baajiyay sababo la xiriira weerar argagixiso oo laga cabsaday.
DHEGEYSO: Taariikhdii Maxamed Cali Kalaay & qaybtii 3-aad (Tebintii Xaaji)